Ingxelo yokufunda ye-HACCP i-China kunye ne-ISO9001 yeNkqubo yokufunda-iShishini leendaba-I-NANTONG CHITSURU IZITHUNZI CO., LTD.
I-EMAIL: [Imeyile ikhuselwe]
Amanzi aselwandle agqunywe
Malunga neSoy Sauce
Malunga neTeriyaki Sauce
Ingxelo yokufunda ye-HACCP China kunye ne-ISO9001 yeNkqubo yokufunda
Ixesha: 2017-12-26 Indawo: 26
Ingxelo yokufunda ye-HACCP China kunye ne-ISO9001 yeProgram yeXesha lokuFunda kwi23.12.2017 ukuya kwi24.12.2017
IZIQULATHO INTSHAYELELO KWI-HACCP kunye ne-ISO 9001 STUDY
1. I-HACCP: Uhlalutyo lweNgozi kunye neeNdawo zoLawulo eziCwangcisiweyo
Inkqubo yothintelo yenkqubo yokukhuseleka kokutya ukusuka kwindalo, amakhemikhali, kunye neengozi zomzimba kwiinkqubo zemveliso ezinokubangela ukuba imveliso egqityiweyo ingakhuselekanga, kwaye uyile imilinganiselo yokunciphisa le mngcipheko ukuya kwinqanaba elikhuselekileyo.
2. Intsapho ye-ISO 9000 yenkqubo yemigangatho yolawulo esemgangathweni yenzelwe ukunceda imibutho ukuba iqiniseke ukuba ziyahlangabezana neemfuno zabathengi kunye nabanye ababandakanyekayo ngelixa lihlangabezana neemfuno ezimiselwe ngokomthetho nakwezolawulo ezinxulumene nemveliso.
1. Unxibelelwano nenye inkqubo
2. Isikhokelo sokusetyenziswa kwenkqubo ye-HACCP
3. Uqeqesho kunye nemfundo: Abasebenzi kufuneka baqonde ukuba yintoni i-HACCP, ifunde izakhono eziyimfuneko ukuze isebenze kakuhle, kwaye kufuneka banikwe izixhobo kunye nezixhobo ezifanelekileyo ukulawula ii-CCP.
4. Ukusetyenziswa: Ukusetyenziswa kwemigaqo ye-HACCP kubandakanya la manyathelo alandelayo e-12, njengoko kuchongwa kolandelelwano lokusetyenziswa kwe-HACCP.
5. Chaza imveliso kunye nenkqubo
B. I-ISO 9001 yosapho ngaphakathi kweMigangatho ye4
1. I-ISO9000: Inkqubo ye-2015 yoLawulo loMgangatho-Izixhobo kunye nesigama.
2. I-ISO9001: Inkqubo ye-2015 yoLawulo loMgangatho.
3. I-ISO9004: Ulawulo oluyimpumelelo lwe-2009 yoMbutho.
4. I-ISO19011: Isikhokelo soPhicotho zincwadi se2011 seNkqubo yoPhicotho.
Isifundo se-HACCP simiselwe ngokwemigaqo esixhenxe. Le migaqo isetyenziselwa ukukhokela uhlolo okanye uphicotho. Ukusilela ekufezekiseni le migaqo kuya kwenza ukuba uphononongo lwe-HACCP lungabhalwa kwakhona xa kuphicothwa iincwadi.
Kule khosi siza kufunda malunga:
1. Isiseko sophicotho
2. Inkcazo esemgangathweni esekwe kwi-ISO 9001
3. Uyenza njani isicwangciso sophicotho-zincwadi
4. Iindlela zokuphicotha imibuzo
5. Ukuqhuba iintlanganiso zokuvula nokuvala
6. Ungazihlela njani iziphumo zophicotho-zincwadi
7. Uqhuba njani uphicotho
Ulawulo lwe-QC eNantong Chitsuru Foods Co, Ltd luthatha uqeqesho lweKrisimesi lweveki yeKrisimesi kunye neNkqubo ye-ISO 9001. Ukuqeqeshwa kweentsuku ze2 nguMnu. Wang, Siqonda ngcono iNkqubo yoLawulo loMgangatho. Sizibophelele ekuphuculeni uKhuseleko loKutya kunye noNxibelelwano. Kwaye bonke abasebenzi beChitsuru kufuneka baye rhoqo kwizifundo zenkqubo yokulawula umgangatho.
Ukhuseleko lokutya luxanduva lwabavelisi. Kwiimeko ezininzi, kufuneka siluthathe oluxanduva ngokuchasene nezinto ezibaninzi abachaphazelekayo, izibonelelo ezingekho mgangathweni, kunye nezinto eziphambili ngokubaluleka. Sinethemba lokuba le ngxelo ibonelela abavelisi ngekhondo lesenzo esiya kwenza ukuba i-arhente ikwazi ukusebenza ngokufanelekileyo kwaye isebenze ekufezekiseni umgomo wayo wokhuseleko lokutya kwihlabathi elitshintsha ngokukhawuleza.
Ngaphambili: UNyaka oMtsha, ikamva elitsha kwi2018
Okulandelayo: Isithsaba esiziQinisekayo, uKhuseleko loKutya okuPhezulu kubaThengi bethu
Gcwalisa ifom kwaye usithumelele umyalezo. Uya kufumana impendulo ngokukhawuleza ngolwazi olucelileyo.
Inombolo yomnxeba: + 86 513-81100810
Ifowuni: + 86 185-2101-4030
Yongeza: Shiyizong, Idolophu yaseLusi, Qidong, Jiangsu, China, 226241
Yiba ngowokuqala ukwazi malunga neemveliso zethu zokugqibela.
yelungelo lokushicilela © NANTONG CHITSURU CHUTSURU COZ, CO. Inkxaso kaMeeall